Dzidza Python Nekukurumidza: Yese Mutauro wePython muMufananidzo Mumwe | la-manette.com
Dzidza Python Nekukurumidza: Yese Mutauro wePython muMufananidzo Mumwe
January 6 2022 27 novembre 2021 ndima Anais Fontaine
Ko kana iwe waifanira kudzidza peji rimwe chete kuti uwane iyo yakazara pfungwa yemutauro wechirongwa? Muchikamu chino, ndiri kugovera infographic kuti ikubatsire kudzidza Python nekukurumidza kupfuura kare.
Nhasi tiri kugovera Yese Python Mutauro mune Imwe Infographic mufananidzo nevaverengi vedu.
China-based developer Yusheng yakagadzira iyi inoyevedza infographic iyo inopfupisa iyo Python 3 programming mutauro mumufananidzo mumwe. Python ndeimwe yeanonyanya kufarirwa programming mitauro uye hunyanzvi hunofanirwa kuve nechero programmer.
Mepu yepfungwa yaYusheng iri pano kwauri nenzira inonzwisisika ino batsira kumhanyisa ndangariro yako.
Unogona kuwana mufananidzo wacho online GitHub, kana kuti chengeta pazasi chaipo.
Wakawana iyi infographic inobatsira here? Tizivise mumashoko ari pasi apa.
Webhu mupepeti chez kure
Anaïs Fontaine mupepeti wewebhu anoda zvemitambo yemavhidhiyo. Ex-yepamusoro-level mutambi weLoL anonyanya kufarira WoW, Overwatch uye Apex. Dingindira rayo: Pisa zvese pasi kuti utange zvakare pane hutano. Unogona kubata Anaïs pakero iyi: anaï[email inodzivirirwa]
Zvinyorwa zvitsva naAnaïs Fontaine (ona zvese)
Yepamusoro 7 Nzira dzekugadzirisa Yekupedzisira Mutsara Haichave Inowanikwa Nyaya pa iPhone - Ndira 18, 2022
WoW BfA 8.3 DPS Chinzvimbo (Makomba uye Ngano Raids) - Ndira 4, 2022
Zvikwata zvakanakisa muFIFA 21 [Pamusoro gumi] - Ndira 2, 2022
Verenga zvakare: Maitiro ekutamba mitambo yeNetflix pane Android uye iOS?
Iwo akanakisa Black Friday madhiri e2021
Chii chinonzi e-reputation?
Pandemic dhijitari bhodhi mutambo wakabviswa kutengeswa nekuda kwemhando uye nyaya dzekuvimbika
Rocket League Sideswipe leaderboards - chinzvimbo system yakatsanangurwa
Maitiro eMicrosoft's Activision Blizzard Kutenga Inofananidzwa Nemamwe Makuru Varaidzo Anowanikwa
Crackdown pane 'inotsausa' cryptocurrency ads inovavarira kuchengetedza vatengi | Nhau dzehupfumi
Activision inoda Xbox kubata makambani emadhora matrillion, anodaro Bobby Kotick
Yepamusoro 7 Nzira dzekugadzirisa Yekupedzisira Mutsara Haichave Inowanikwa Nyaya pa iPhone
Iyo Yakazara Monster Rondedzero uye Micromon Database
Vakafa neMasikati Makodhi (Ndira 2022)
Mitambo yakanakisa senge Subnautica
Iwo gumi akanakisa cyberpunk mitambo yemafoni eAndroid uye mahwendefa
Coin Master Yemahara Spins - zvinongedzo zvinogadziridzwa zuva nezuva (Ndira 2022)
Mitambo Yakanakisa SePokemon Snap [2022 Rondedzero]
Mitambo mishanu yekutamba pane yako itsva Pixel 5 kana Pixel 3 XL
RAID: Shadow Legends Makodhi eKudzikinura (Ndira 2022)
Mitambo yakanakisa seThe Sims
Mitambo yakanakisa seXCOM
Yepamusoro 7 Mitambo Yakanakisa Inokuita Kuti Uve Hungwaru Kune iPhone & iPad (iOS)
Mitambo yakanakisa seKudzora
Mitambo Yakanakisa SeMasero Akafa
Mitambo yakanakisa seTetris
Maitiro ekubvisa Enchantments muMinecraft muna 2022 (Nhungamiro)
10 Akanakisa Shader eMinecraft 1.18 (Ndira 2022)
Yakanakisa Mitambo Senge Musuwo Werufu
Mitambo Yakanakisa SeRimWorld [2022 List]
Mitambo Yakanakisa SaMario Party 2022